Tuesday September 23, 2014 - 12:32:04 in Wararka by Super Admin
Wasaarada Gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in gantaallada maraakiibta gujisyada ka dhacda iyo diyaaradaha dagaalka ay madaafiic ku garaaceen bartilmaameedyo gudaha wadanka Suuriye ah.
Ku dhawaad 12 qof ayaa larumeysanyahay in lagu dilay duqeyn culus oo ku dhacday magaalada Raqqa ee waqooyiga Suuriya oo ay maamusho dowladda Islaamiga ah.
Ilo wareedyo laga helay dhanka gobolka Idlib ee Suuriya ayaa xaqiijinaya in 43 qof oo carruur iyo haween kujiraan ay ku shahiideen duqeymo ay fuliyeen isbahaysiga Sheydaaniga ah ee Mareykanku hoggaamiyo.
Wakaaladaha wararka ayaa baahiyay in sedax dowladood carab dawaaqiid ah ay ka qeyb galeen duqeydmaha ka dhanka ah mujaahidiinta dowladda islaamiga ah waxaana dowladahaasi kamid ah Qadar,Urdun iyo Sacuudiga.
Sidoo kale duqeymaha ayaa si aan kala sooc laheyn loola bartilmaameedsaday Mujaahidiinta Jabhadda Al Nusrah iyo dowladda Islaamiga ah waxaana xusid mudan in Jabhadda aysan kujirin islaamiyiinta ay isbahaysiga udhisteen kufriga adduunka balse waxaa muuqata in cadawgu uusan kala sooceyn muslimiinta qoriga u sida dib usoo celinta khilaafadii islaamka ee burburtay.